မန္တလေး” သပြေညို တိုက်ပွဲ ” ထိုင်သပိတ်တွင် ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ မအေးသောင်း – Online News Post
မန္တလေး” သပြေညို တိုက်ပွဲ ” ထိုင်သပိတ်တွင် ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ မအေးသောင်း
အေးချမ်း ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှ တရားတွေနဲ့ ပရိသတ် တွေ ကို အမြဲ အချစ်ပို ဖမ်းစား ထားတဲ့ ပြည်သူ့ အချစ်တော်လေး က တော့ သရုပ် ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး မအေးသောင်း ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .
လတ်တ လောမှာ ဆိုရင် တော့ မအေးသောင်းက ပြည်သူ လူထု နဲ့အတူ ရပ်တည် ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် မှုတွေကို မမော မပန်း နိုင်အောင် တက်တက် ကြွကြွ လုပ် ဆောင် နေတာ တွေ့မြင်ရပါ တယ် ။ ဒါ့ အပြင် အရေး ကြီး သတင်းတွေ ကိုလည်း သူမရဲ့ အကောင့်မှာ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြ လျက်ရှိ တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ အရှိန် အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အားကောင်း လာတဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ သတင်းတွေထိ ပြန့်နှံနေခဲ့ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း မအေးသောင်း ဟာ မန္တလေး ” သပြေညို တိုက်ပွဲ ” ထိုင် သပိတ်မှာ ပြည်သူနဲ့ အတူ ပါဝင် ကာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ပြန် ပါတယ် … .
ေအးခ်မ္း ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွ တရားေတြနဲ႔ ပရိသတ္ ေတြ ကို အျမဲ အခ်စ္ပို ဖမ္းစား ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္ေလး က ေတာ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး မေအးေသာင္း ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
လတ္တ ေလာမွာ ဆိုရင္ ေတာ့ မေအးေသာင္းက ျပည္သူ လူထု နဲ႔အတူ ရပ္တည္ ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈေတြကို မေမာ မပန္း နိုင္ေအာင္ တက္တက္ ႂကြႂကြ လုပ္ ေဆာင္ ေနတာ ေတြ႕ျမင္ရပါ တယ္ ။ ဒါ့ အျပင္ အေရး ႀကီး သတင္းေတြ ကိုလည္း သူမရဲ့ အေကာင့္မွာ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ၿပ လ်က္ရွိ တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
တစ္ေန႔ ထက္ တစ္ေန႔ အရွိန္ အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ အားေကာင္း လာတဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြဟာ နိုင္ငံတကာရဲ့ သတင္းေတြထိ ျပန႔္ႏွံေနခဲ့ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း မေအးေသာင္း ဟာ မႏၲေလး ” သေျပညိဳ တိုက္ပြဲ ” ထိုင္ သပိတ္မွာ ျပည္သူနဲ႔ အတူ ပါဝင္ ကာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ျပန္ ပါတယ္ … .
Previous post (၂) ငါးလုံးအရေးတော်ပုံ အဖွင့်နေ့ မှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် ရဲ့ ဝမ်းသာစရာကောင်းလှတဲ့ စကား
Next post ဇာတိရွာလေးကိုပြန်ပြီး (၂၂)ပြည့်မွေးနေ့ကို အလှုလေးပြုလုပ်ပြီး ကျင်းပလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး